Momba anay | Shaoxing Huawo Auto Parts Co., Ltd.
Orinasa matihanina izahay izay misahana manokana amin'ny fanaovana, famolavolana ary fampivelarana kojakoja fiara. Ao amin'ny2004, Huawo dia nanomboka ny famokarana fitaovam-pitaovana TPO / TPE, tsihy fiara, tsihy vatan-kazo, karipetra ary Mat Soundening Mat ny fiara, noho ny fananantsika departemantan'ny fampivoarana ny akora sy ny vokatra.
Ny tsihy fiara TPE / TPR no kalitao tsara indrindra eny an-tsena, mahasoa ny tontolo iainana, Anti-slip, ary miaro ny toetrandro rehetra, miaro ny fiaranao amin'ny loto, fotaka, sira, orana ary lanezy. Ary 100% no fanao mifanaraka amin'ny fiaranao, mahatonga ny fiainana ho tsotra sy hadio izany.
Nandritra ny taona maro fampandrosoana haingana, dia nanangana ny tombony manokana vokatra sy ny tonga lafatra rafitra fitantanana kalitao sy ny fenitra laboratoara. Ankehitriny dia manome mats sy fiara Mat Maty ho an'ny Volkswagen sy Toyota izahay.
Rehefa nihalehibe ny orinasantsika sy ny mpanjifanay dia manana finiavana hamokatra sy hamatsy kojakoja fiara tsara kalitao amin'ny tsena izahay.
Manana ny masinina avy amin'ny fitaovana ka hatramin'ny vokatra farany izahay. Manome Serivisy matihanina sy fotoana fandefasana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra izahay.
Homba anao izahay hanorina fifandraisana maharitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-miasa.